Nezve iye akatanga - Chengdu Xinzi Rain Clothing CO., Ltd.
Akagara achida shangu, uye anovimba kuti vakadzi vese vanogona kupfeka shangu dzakakwirira dzinozvikwanira uye nekuvapa simba rakawanda. Yakavambwa yakazvimiririra shangu dhizaini mu1998, ichinyanya kutarisisa kutsvagurudza maitiro ekugadzira shangu dzevakadzi dzemazuva ano dzakasununguka uye dzine fashoni. Uye ndanga ndichiedza kuputsa maitiro uye kutsanangurwa. Kuita kuti vakadzi vapfeke shangu dzakakwirira hazvichisiri basa rakaoma. Uye ukapfeka zvitsitsinho zvisina kurembera, enda kwavanotarisira kuenda.
Nekudaro, makore ezvekupfeka zvemukati akamusiya aine chishuwo chakasimba chevakadzi kuti vapunze maitiro avo, iye akatofunga nezvenyaya ye "Yakagadzirirwa Woga" kuti azive kuti mukadzi wese anokodzera yavo yemukati zvipfeko zvemukati. Izere nesimba, seksikäs, runako, kumwe kutaura kwekunaka kwevakadzi.
Akagara achitenda kuti kuve seksiketi hakusi kwekungofadza vamwe, asi zvakare nezvekusununguka. Saka ndakatanga kuumba wega mucherechedzo muna 2004, uye nenzira iyi, pachave nebasa rakasimba, chinangwa chekutakura nekuenda kure, chiratidzo chevatengi kutanga, uye basa rekugara uchiteerera uye kuzadzisa zvinodiwa nevatengi. Mucherechedzo wakapfuura makore gumi nemanomwe pasi pehutungamiriri hwake.
Mushure mekuenderera kwekutsvagurudza uye kuyedza, vakabvumirana mukugamuchira kurumbidzwa uye kurumbidzwa kubva kune vatengi mune akasiyana marudzi, senge Sexy Lingerie, Sportswear, uye Seamless Bra & Brief Sets. Mukutenda kwake, mukadzi wese, zvisinei nezera, basa, uye chimiro, vanokodzera zvipfeko zvavo zvemukati.
Xinzi Mvura yakawana budiriro huru nekuda kwekunyatsogadzikana kupfeka ruzivo uye dhizaini dhizaini. Mukurumbira wayo watanga kutenderera, uye unopenga unodiwa nevakadzi vazhinji vanozvimiririra.
Iroto rekupedzisira kuunza simba kumukadzi wese anopfeka mbatya dzake dzemukati kubva kuna Xinzi Yu, kugara vachipaza nekuchinja simba ravo, kupedzisa kurota kwavo nesimba iri, uye kuenda kumberi zvine chisimba uye nerudo ...